Distributing and Marketing Food Supplements, Skincare, Cosmetics, Fitness Equipment, Consumer Goods, and Lifestyle products in Myanmar | Medi Myanmar Medi Myanmar Group
Medi Myanmar was founded in 1991 with the vision to improve the healthcare and lifestyle standards of the community in Myanmar.
reliable and reputable manufacturers across the world.
A guiding theme of concern for mankind and mission to raise the healthcare standards of the local community led to the establishment of MEDI MYANMAR GROUP LTD in the year 1991. The company started off engaging in the importation, marketing, and distribution of pharmaceutical formulations from reputable and reliable manufacturers. Since then, we have expanded to distributing and marketing food supplements, skincare, cosmetics, fitness equipment, consumer goods, and lifestyle products.
16,000+ The Whole Distribution
/ 06 October, 2019
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၆ ) ရက်နေ့တွင် Yangon Convention Center (YCC) ခန်းမ၌ ကျင်းပသော World Marketing Summit Myanmar 2019 ပွဲတွင်....
/ 12 September, 2019
Symposium On Applying Medical Nutrition Therapy for Common Metabolic Disorders in General Practice
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးပညာစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Medi Myanmar Group Ltd. မှ Symposium On Applying Medical Nutrition Therapy for Common Metabolic Disorders in General Practice....
/ 18 August, 2019
Symposium On “Two-for-One Bargain; Using Cilnidipine to Treat Hypertension”
သွေးတိုးရောဂါအတွက် ပိုမိုထိရောက်အကျိုးများစေသောစီနဒပင်း(Cilnidipine)ဆေးဝါးအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုကုသခြင်း”အကြောင်းဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ] မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးပညာစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Medi Myanmar Group Ltd. မှအဆိုပါ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ LotteHotel,Sapphire Ballroom 1 &2တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၈....
/ 16 August, 2019
Medi Myanmar Group Ltd. မှ ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ် နှင့် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးအထက်တန်းကျောင်းတို့တွင် OnDoctor မှ ကြီးမှူးပြီးကျင်းပါသည့် Power of Wellness လူငယ်ကျန်းမာရေးပညာပေးဟောပြောပွဲတွင် Gold Sponsor အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည့်....
Symposium on Role of Nutrition on Behaviour and Cognition in Children
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးပညာ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Medi Myanmar Group Ltd. မှ “Symposium On Role of Nutrition on Behaviour and Cognition in Children”....
/ 27 July, 2019
၂၀၁၉ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (၂၇-၂၈) ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်ခန်းမ၌ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဖောင်ဒေးရှင်း(မြန်မာ) မှကြီးမှူး ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့အသည်းရောင်ရောဂါနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားပွဲတွင် Medi Myanmar Group Ltd. မှ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများအခမဲ့ စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ရလဒ်များအပေါ်ဆွေးနွေး....
/ 24 July, 2019
Symposium On Understanding Malnutrition
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးပညာစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Medi Myanmar Group Ltd. မှ “Symposium On Understanding Malnutrition” “အာဟာရချို့တဲ့မှုအကြောင်းသိကောင်းစရာများ” ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးတိုးချဲ့ဆောင်သစ် Conference Hall တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၄....
Symposium On Non Alcoholic Fatty Liver Disease
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးပညာစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် “Symposium On Non Alcoholic Fatty Liver Disease” “အရက်ကြောင့်မဟုတ်သောအသည်းအဆီဖုံးခြင်းရောဂါ အကြောင်း” ဆေးပညာဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို ၇.၇.၁၉ (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် မန္တလေးမြို့ Mercure Mandalay Hill Resort....
/ 26 March, 2019
၂၀၁၉ ခုနှစ် အတက်ရောဂါ အထိမ်းအမှတ် (PURPLE DAY)
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊မတ်လ (၂၆)ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) ၌ ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံသစ်ကြီးတိုးချဲ့ဆောင်သစ်ဝင်းအတွင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတက်ရောဂါ အထိမ်းအမှတ် (purple day) အခမ်းအနားတွင် Medi Myanmar Group Limited မှလည်း....
/ 13 March, 2019
World Kidney Day Yangon Children Hosptial, Halpin
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ကျောက်ကပ်ရောဂါနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဝေဒနာရှင် သားငယ်/သမီးငယ်များ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုရန်ကုန် ဟယ်လ်ပင် ကလေးဆေးရုံကြီးကျောက်ကပ်ဌာန ၌ ၁၃.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင်Medi Myanmar Group Ltd မှ တက်ရောက် လာကြသောကလေးငယ်များအားရောင်စုံခြယ် ခဲတံဘူးများလက်ဆောင်ပေးခြင်း....
/ 23 February, 2019
1st MMA Conference Sittwe
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှကြီးမှူးကျင်းပသော 1st MMA Conference အခမ်းအနားကိုစစ်တွေမြို့ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃)ရက် နှင့် (၂၄) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲတွင် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းပြခန်းတွင် Medi Myanmar Group....